မော်တော်ဆိုင်ကယ် tubeless ယာ, မော်တော်ဆိုင်ကယ် tubeless ယာ - Safeway တုရုမြို့
တာယာအကောင့်သို့သေချာသော Cross-တိုင်းပြည်စွမ်းဆောင်ရည်ကြာနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းကျောက်ခင်းရှေ့တွင်လမ်းမောင်းနှင်မှုချောမွေ့ပုံစံမြောင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်ရေနုတ်မြောင်းမြောင်းရက်နေ့တွင်, တာယာအလွန်ကောင်းသောရေနုတ်မြောင်းစွမ်းဆောင်ရည်သေချာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နက်ရှိုင်းသောပုံစံ, ကြီးမားတဲ့ပုံစံဘလောက်ဒီဇိုင်း။
Scooter တုရုမြို့ SF221
မာရျနတျစံနမူနာတည်ငြိမ်ခြင်း, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, antiskid, ရေနုတ်မြောင်း, တာရှည်ခံနာနတ်သီးဒီဇိုင်း, 6PR ။
Rounded & တိုးချဲ့ပခုံးပရိုဖိုင်းကိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် groove အကျိုးကျေးဇူးများကျော် Excellent ကဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ သာ. ကောင်း၏ cornering Superior သာ. ကောင်း၏ချုပ်ကိုင် braking ပေါ်သို့အကွိမျမြားစှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ကို cut-အနားပိုဒြပ်ပေါင်းများ Features
sporty, directional ပုံစံ All-ဝန်းကျင်လွှဲပြောင်းပေးစိုစွတ်သောစွမ်းဆောင်ရည်တပ်ဦးနှင့်ရရှိနိုင်နောက်ဘက်အရွယ်အစားအတွက်ထောင့်သွက်လက် angle groove အကူအညီများတိုးမြှင့်။
• Features တပ်ဦး Fitment • Direct •တိုးချဲ့ပခုံး•က Round ပရိုဖိုင်း• '' ရှုပ်ထွေးသော '' ဝင်း•ထူးခြားသောနင်းပုံစံအကျိုးကျေးဇူးများ• သာ. ကောင်း၏တည်ငြိမ်မှု• Sharp ကစွမ်းရည်•ကောင်းမွန်သောတိမ်း•ကောင်းမွန်သောဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ•စိုစွတ်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲ cornering
အားလုံးဘီး5နံရိုးနင်းပုံစံ Excellent ကမိုင်အကွာအဝေးကိုနူးညံလမ်းချုပ်ကိုင်ရောင်းချသူအကျိုးအမြတ် Features
Safeway တုရုမြို့ Zhucheng စီးတီး, ရှန်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည်။ တစ်နှစ် 2010 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကျနော်တို့ First Class မော်တော်ဆိုင်ကယ်တာယာများနှင့်ပြွန်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်နေကြသည်။ အပြည့်အဝပ္ပံနှင့်ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးအတိတ်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းစျေးကွက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းသောဂုဏ်သတင်းကိုခံစားပါစေ။
SAFEWAY အကြောင်း Latest News
ကျနော်တို့တရုတ် Canton တရားမျှတသော 121th ခုနှစ်တွင် (နွေဦးရာသီ, 2018) Are
2018 ခုနှစ်ဧပြီလ 15-19 ခုနှစ်မှာကျနော်တို့ကွမ်ကျိုးအတွက် Canton တရားမျှတတဲ့တက်ရောက်ရန်။ ကြိုဆိုပါတယ်သူငယ်ချင်းများကိုအိမ်နှင့်ပြည်ပအနာဂတျအတှကျဆွေးနွေးချက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်။
ကျနော်တို့တရုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများတရားမျှတသော 77 ကွိမျမွောခုနှစ်တွင် (နွေဦးရာသီ, 2019) Are
ကျနော်တို့တရုတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများတရားမျှတသော 76th ခုနှစ်တွင် (ဆောင်းဦးရာသီ, 2018) Are
ZHUCHENG Industrial Park, Weifang, တရုတ်
အားလုံးသင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး IN 24 နာရီဖြင့်သာတုံ့ပြန်သည်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စီလမ်းတစ် SAFEWAY တုရုမြို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို
လမ်းအတိုင်းစက်ဘီးစီးတာယာ , Moto လက်ဝါးကပ်တိုင်တုရုမြို့ , Motorcycle Natural Tube 4.10-18 , လက်ဝါးကပ်တိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တုရုမြို့ , မော်တော်ဆိုင်ကယ်လက်ဝါးကပ်တိုင်တုရုမြို့ , Oem Motorbike Tyre,